Israely : Ny fampiasan’ny tovovavy finday amin’ny fiarahan’olon-droa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Avrily 2008 18:23 GMT
Vakio amin'ny teny Français, македонски, Português, Shqip, বাংলা, Deutsch, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Milalao Afo : Ny fampiasan'ny tovovavy palestinianina any Israely Finday [ANG – PDF] [Playing With Fire: On the domestication of the mobile phone among Palestinian teenage girls in Israel] no lohatenin'ny tahirin-kevitra iray nosoratan'i Hiyam Hijazi-Omari sy Rivka Ribak. Ny fampiasan'ireo tovovavy any Israely ny finday moa no nanaovan'izy ireo fanadihadiana. Voalaza amin'ny antsipirihany ao amin'io tahirin-kevitra io ny fampiasan'ny tovovavy Israelianina finday ; finday nomen'ny sipany moa no nampiasain'ireo tovovavy tamin'izany (2003 – 2006), ary tsy fantatry ny ray aman-dreniny.
Izao no nosoratan'i danah boyd ao amin'ny Shift6 :
Lahatsoratra ao amin'ny BBC mikasika ny fampiasan'ny tovolahy any UAE ny Bluetooth handefasana hafatra manokana ho an'ny vehivavy any amin'ny toerana mibaribary.
Efa nisy lahatsotra teto amin'ny GVO mikasika ny fanadihadiana nataon'i Adnan Gharabiya amin'ny fampiasan'ny tanora Israelianina Bedouin ny IM.